उनलाई मलेसियामा कहिं देख्नु भएको छ की ? | देश परदेश Desh Paradesh
नेपाली मिति: ०९:०६:३९ मध्यान्ह २०७८ कार्तिक ५ गते, शुक्रबार
मलेशिया गएर उनले कमाएर घरमा एक लाख पठाए । त्यो उनी मलेसिया जाँदा लागेको खर्च बरावर पनि होइन । उनी १ लाख १० हजार तिरेर मलेसिया गएका थिए ।
पहिला कुराकानी हुँदा काम गाह्रो छ, ज्यानभरी दाद आएको छ भनेर भन्ने गरेका थिए उनले । छोराको कुरा सुनेर बाबु केशरले घर फर्कि समेत भने । तर श्यामलालले आफू विदेश आइसकेपछि केहि कमाएरै आउँछु भन्ने गरेको बाबु केशर बताउँछन् । सुरुमा गएको कम्पनी छोडेर भागेर काम गर्दा आइपर्ने समस्याका बारेमा बाबु केशरलाई थाहा थियो । त्यसैले उनले छोरालाई साथीहरुले भागेर काम गर भनेर भन्लान, तर जति हुन्छ त्यहि कम्पनीमा काम गर्नु भन्दै छोरालाई सम्झाउने गर्दथे ।
केशर बहादुरका ३ छोरी १ छोरा हुन् । भएको एउटा छोरा पनि मलेशियाबाट नफर्किएपछि श्यामलालकी आमा बिरामी जस्तै भएकी छन् । श्यामलाल भागेर काम गर्ने गरेको दाङतिरका एकजना उनकै साथिले परिवारलाई जानकारी दिएका हुन् । तपाईको छोरो एकदम बिरामी भएको छ भनेर तिनै व्यक्तिले खबर गरेपछि मात्र परिवारले उनी भागेर अन्यत्रै काम गर्न थालेको थाहा पायो । छोरा बिरामी छ भन्ने सुनेपछि उनीहरुले छोराको नाममा ग्रह कटाउन पुजापाठ पनि गरे ।
छोरालाई असाध्यै बिरामी परेको भन्ने थाहा पाएपछि केशर बाहादुरले मलेशियामा रहेका श्यामलालको मामालाई भेट्न आग्रह गरे । बिदेशको ठाउँ भन्ने बित्तिकै बिदा नपाउने । आफ्नो बिदा मिलाएर जाँदा श्यामलाल हस्पीटलबाट भागिसकेको जानकारी उनका मामाले परिवारलाई दिए ।
श्यामलाल भागेर काम गर्दा उनको नाम परिवर्तन गरि सविन खड्का भन्ने राखिएको थियो । श्यामलालको साथि दाङका चेतनसँग कुराकानी गर्दा उनी मलेसियामा ‘सविन खड्का’ भनेर चिनिने गरेको, निक्कै बिरामी परेर दुब्लो भएको र उपचारको लागि हस्पीटल भर्ना गरिदिएकोसम्म मात्र आफूलाई थाहा भएको त्यसपछि उनी कहाँ के गर्दैछन् भन्ने थाहा नभएको बताए ।
श्यामलाल (सबिन ) ले भागेर मलेशियाको सामसुङ्ग ईलेक्ट्रोनीक्स भन्ने कम्पनीमा ४ महिना काम गरे । ४ महिना काम गरेपछि उनी बिरामी परे । केहि समय नजिकैको मेडिकलबाट औषधी खाए तर सुधार नभएपछि कम्पनीको सुपरभाईजर बिजय शाहले केलाङ्गको केलाङ्ग अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरेका थिए । तर उपचारको लागि लगेको ४ दिन पछि उनी आफै अस्पतालबाट भागेको र हालसम्म पनि श्यामलाल (सविन) का बारेमा आफुलाई केहि थाहा नभएको शाहले बताए ।
सुचना केन्द्र कावासोतीमा छोरा हराएको निबेदन दिन आईपुगेका केशरले श्यामलालकी आमाले छोरा नआए म बाँच्नुको अर्थ छैन भन्दै रुने गरेको र आफुलाई छोरा कसरी खोज्ने भन्ने जानकारी नभएकाले सुचना केन्द्रमा आएको बताए । उनले भने “म त दिनभर ई–रिक्सा चलाएर हिंड्छु काम गर्दा दिन कट्छ । तर उसकी आमाको समय भनें छोरालाई सम्झदै रोएर नै वितिरहेको छ ।”
तपाईले यो तस्वीरमा देखिएका श्यामलाल सुनार (सविन खड्का) लाई देख्नु भएको छ ? यदि उनका बारेमा तपाईसँग कुनै जानकारी भएमा परिवारलाई ९८००७५७३९४, ९८६९४२८२९२ सम्पर्क गरिदिनु होला । अथवा सुचना केन्द्र कावासोतीको फोन नं ०७८५४०३११ मा सम्पर्क गरेर पनि उनका बारेमा जानकारी गराइदिनु सक्नुहुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् आमा भन्छिन्ः कुखुरा जुध्दा पनि मेरो छोरो परदेशबाट आइपुग्यो झैं लाग्छ
कुवेतले कोभिड १९ का कारण लाग्दै आएको बन्देज हटाउने
खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका र अवैधानिक रुपमा बसेकाहरु सहजै स्वदेश फर्किन पाउने
नयाँ कम्पनीमा काम गर्न वा स्वदेश फर्किन पाइने सुविधा सहित खुल्यो आममाफी
साउदी विस्तारै पुरानै लयमा फर्किदै
देशपरदेश सम्वाददाता, काठमाडौं १६ आश्विन २०७८, शनिबार